तपाईको साना व्यवसायका लागि ब्लगिंगका Bene फाइदाहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
सम्पादकको पिक2सक्छ, 20212सक्छ, 2021 नवदीप सिंह अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
ब्लगहरू लेख्न सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको दर्शकहरूको रुचिहरूको बारेमा कुरा गर्दछ, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री तपाईंको हेडिंगको साथ प्रासंगिक छ।
तपाईंले ती कुञ्जी शब्दहरूको वरिपरि ब्लगहरू लेख्नु पर्छ जुन तपाईंको लक्षित श्रोताले खोजी गर्दछ।
तपाईंको सम्भावित उपभोक्ताहरूलाई बिक्रीको लागि निःशुल्क शिक्षा दिनु सधैं उत्तम रणनीति हुन्छ।
यदि ती व्यवसायहरूले मार्केटिंगमा खर्च गरे पनि, यो आधुनिक प्रवृत्तिको रूपमा छैन। सबै चीज अनलाइन भएको कारण यो डिजिटल मार्केटिंग हो जुन पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छ। र यसको डिजिटल मार्केटिंगको एक प्रमुख पक्ष हो ब्लगिंग.
ब्लगहरू प्रभावकारी हुन्छन् किन कि तिनीहरू अत्यधिक खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूसँग तपाईंको संलग्नता बढावा दिन्छन्।
एक ब्लगको साँचो शक्ति उपयोग गरेर, एक अनन्त लाभ लिन सक्दछ। यद्यपि सर्त यो हो कि तपाईलाई ब्ल्गमा काम गर्ने बखत बढुवा गर्न सकिदैन। उद्देश्य एक सूचना रणनीति र दिमागमा तपाईंको श्रोताको चासोको साथ जानकारीमूलक लेखहरू लेखेर मूल्य थप गर्नु हो।
ब्लगि ofका फाइदाहरू
पक्षमा केस बनाउनका लागि, हामीले ब्लगका केहि फाइदाहरू उल्लेख गरेका छौं र ती कसरी तपाईंको सुधार गर्न सक्छन् डिजिटल विपणन रणनीति, र बदलेमा, तपाइँको व्यवसाय को लागी बिक्री बढावा।
१. ड्राइभ गुणवत्ता ट्राफिक
प्रत्येक प्रकाशित ब्लग तपाईको साइटमा अर्को अनुक्रमणिका पृष्ठ थप गर्दछ, तपाईको वेबसाइटको सम्भावना बढाउँदै गुगलको एल्गोरिथ्ममा दृश्यात्मक हुनेछ। र उच्च दृश्यता, अधिक गुणस्तर ट्राफिक तपाईंको वेबसाइटमा निर्देशित हुनेछ।
यदि अधिक व्यक्ति तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्छन्, यसको मतलब अधिक प्रश्नहरू, तपाईंको सम्पर्क फारमको भरि, र अन्तमा, अधिक मूल्यवान खरीदहरू। यसैले, ब्लगहरू लेख्न सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको दर्शकहरूको रुचिहरूको बारेमा कुरा गर्दछ, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सामग्री तपाईंको हेडिंगको साथ प्रासंगिक छ।
२. SEO बढाउनुहोस्
तपाईको वेबसाइटलाई मात्र दर्जा दिनुको सट्टा, एसईओ खोजी परिणामहरूमा तपाइँको प्रतिद्वन्द्वीमाथि तपाइँको व्यवसाय बनाउन सहयोग गर्दछ। यसको प्राप्त गर्ने एक प्रभावी तरीका भनेको एसईओको लागि तपाईंको ब्लगि optimलाई अनुकूलित गर्नु हो।
तपाइँ प्रासंगिक सामग्री सिर्जना गर्न सुनिश्चित गर्न, तपाइँले ती लक्षित शव्दहरू वरपर ब्लगहरू लेख्नु पर्छ जुन तपाइँका लक्षित दर्शकहरूले खोजी गर्दछन्। यसले Google एल्गोरिदमलाई तपाईंको ब्रान्ड SERPs मा धेरै उच्च र्याक गर्न मद्दत गर्दछ।
ती ब्लग शीर्षकहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो श्रोताको बीचमा अधिक प्रचलित फेला पार्नुभयो। यसले तपाईलाई ब्लगि ofको राम्रो फाइदा तान्न अनुमति दिन्छ। तपाइँको सम्भावित अनलाइन ग्राहकहरूलाई कसरी अझ राम्रो बुझ्न सकिन्छ भनेर विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि, तपाइँaलाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किनकि यसले तपाईंलाई डिजिटल मार्केटि marketingको अवधारणाहरू सफलतापूर्वक बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ।
नयाँ ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्नुहोस्
तपाईंको व्यापार बढ्छ किनभने तपाईंको ग्राहकहरु बढ्छन्। र त्यहि ठाउँमा ब्लगि helps सहयोग गर्दछ। ब्लगहरू प्रभावकारी हुन्छन् किन कि तिनीहरू अत्यधिक खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूसँग तपाईंको संलग्नता बढाउँछन्।
ब्लगिंगले तपाइँको ब्रान्डको मेसेजि strengthenलाई बलियो बनाउँदछ र तपाइँको लक्षित श्रोतालाई प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउँछ। जानकारीमूलक ब्लगहरूले तपाईंको पाठकहरूलाई उनीहरूको समस्याहरूको समाधान फेला पार्न र तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्न सक्षम गर्दछ। स्पष्टीकरणात्मक र अन्तर्क्रियात्मक ब्लगहरूको पहिचानले तपाईंको श्रोताहरूको विचारलाई खरीद गर्न प्रभाव पार्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले तपाईंको दर्शकहरूको ध्यान बढाउन मद्दत गर्दछन्, जसले त्यसपछि खरीददारहरूमा अनुवाद गर्दछ।
Your. तपाइँको ब्रान्ड USP हरू प्रदर्शन गर्नुहोस्
तपाइँको प्रयोगकर्ताहरूको समस्याहरूको लागि बहुमूल्य समाधान प्रस्ताव गर्ने क्रममा, तपाइँ तपाइँको ब्लगमा तपाइँको ब्रान्डको धेरै युएसपीहरू थप्न सक्नुहुन्छ र श्रोतालाई उनीहरूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ।
ब्लग्सले ब्राण्डको विगतको अनुभवको संग्रहको रूपमा काम गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले तपाइँको व्यवसायबाट के आशा गर्न सक्छ भनेर बुझ्न अनुमति दिन्छ। यसले ब्रान्डलाई उनीहरूको श्रोताको अगाडि कडा केस प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र खरीद गर्नका लागि उनीहरूलाई डोर्‍याउँछ।
ब्लग्सले ब्राण्डको विगतको अनुभवको संग्रहको रूपमा काम गर्दछ।
Your. तपाईंको ग्राहक अनुभवमा मूल्य समावेश गर्नुहोस्
खरीददारहरू बस भद्बी बिक्रीको माध्यमबाट आकर्षित हुँदैनन्। तिनीहरू अधिक आकांक्षा। केहि चीज जसले उनीहरूको खरीदलाई मूल्य थप्न सक्छ र उनीहरूको समग्र खरीद अनुभव बृद्धि गर्दछ। ब्लगिंगको साथ, तपाईं यसलाई सम्भव बनाउन सक्नुहुन्छ।
ब्लग्स भनेको तपाइँको वेबसाइटमा नियमित रूपमा सामग्री प्रकाशित गर्नु हो भनेको होइन। तिनीहरूले तपाईंको दर्शकहरूलाई मूल्यवान केहि प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ। जे पनि जे पनी उनीहरूको चाहना पूरा गर्न सक्छ र तपाइँका प्रतिद्वन्द्वीहरु भन्दा राम्रो छ, जो बदलेमा, रूपान्तरण को दिशा मा ड्राइव गर्न सक्छन्।
तपाईंको सम्भावित उपभोक्ताहरूलाई बिक्रीको लागि निःशुल्क शिक्षा दिनु सधैं उत्तम रणनीति हुन्छ। साझेदारी विचारहरू, समाधानहरू, चेकलिस्टहरू, इत्यादि बनाउनका लागि केहि तरिकाहरू हुन सक्छन्।
Great. ठूलो जोखिम प्राप्त गर्नुहोस्
ब्लगिंग सब भन्दा कुशल माध्यम मध्येको एक साबित भएको छ वा एक ब्रान्ड को बारे मा बज उत्पन्न गर्दछ। तिनीहरू सम्भावित ग्राहक बन्न सक्ने व्यक्तिहरूमा जानकारीपूर्ण सामग्री पुर्‍याउन प्रभावकारी हुन्छन्।
यदि तपाईंको ब्लगले तपाईंको श्रोतालाई मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छ भने गुगल एल्गोरिदमले तिनीहरूलाई लिन्छ। र जब अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ फेला पार्दछन्, तिनीहरूलाई ब्राण्डको बारेमा पनि थाहा हुन्छ।
यदि तपाईंले आफ्नो ब्लगको लागि ठूलो सामग्री विकास गर्नुभयो भने, तपाईं दर्शकहरूको विश्वास मात्र स्थापित गर्नुहुन्न तर तिनीहरूको सोचाई नेता पनि बन्नुहुन्छ। यसले तपाइँको ब्रान्ड सम्बन्धी कुनै पनि उद्धरण तपाइँको पाठकहरूको माझमा उत्साह जगाउँन, वा उनीहरूको चाहना जगाउन पनि मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो सानो व्यवसाय फस्टाउन महत्वाकांक्षा, ब्लगिंग प्रयास लायक छ! त्यो भनेको भइरहेको छ, तपाई के पर्खदै हुनुहुन्छ? सूचनाहरू र रमाईलो सामग्री प्रस्ताव गर्ने ब्लगहरू प्रकाशन गर्न सुरू गर्नुहोस्, र तपाईंको ब्रान्ड अनुकूल परिणामहरूको सूचना दिनुहोस्।
ब्लगिंग सांप्रदायिक समाचार
नवदीप सिंह एसईओ विश्लेषक, ब्लगर, र भारतबाट ग्रोथ हैकर हुन्, जसले काम गरिरहेका छन् इन्टर्नेट मार्केटिंग स्कूल अहिले पाँच बर्षको लागि। उहाँ डिजिटल मार्केटिंग, खोजी ईन्जिन अनुकूलन, फेसबुक विज्ञापन, र ब्लगिंगमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ।
लकडाउन समाप्त भएपछि गर्नुपर्ने १० महान कार्यहरू